अव गोप्य कुरा दिलखोलेर भन्नुस् सगुन एपमा,अभिनेतृ श्रद्धालाई समेत तारिफ गरिन् (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
अव गोप्य कुरा दिलखोलेर भन्नुस् सगुन एपमा,अभिनेतृ श्रद्धालाई समेत तारिफ गरिन् (भिडियो)
बलिउड अभिनेतृ श्रद्धालाई प्रभावित गरेको सगुनएप डाउनलोड गर्ने कि ?
काठमाडौं। पछिल्लो समय अधिकांश सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता प्रेमि/प्रेमिका, आफन्त वा साथीसँग च्याटमा रमाउँछन्। दुईजनाबीच हुने च्याटमा अधिकांश कुरा गोप्य हुन्छन्। ती गोप्य कुरा सबै प्रकारको मेसेन्जरमा भने रेकर्ड भएर बसिरहेको हुन्छ। च्याट गर्ने दुईबीच सम्बन्ध सुमधुर रहुञ्जेल त ठीकै हुन्छ, जव सम्बन्धमा समस्या आउँछ, गोप्य भनिएका कुरा तिनै सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट हुन पुग्छ।
अब सामाजिक सञ्जालमा गरिएका यस्ता कुराबाट डराउनु पर्दैन। ढुक्कसँग आफ्ना गोप्य कुरा च्याटमा गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिएको छ सगुनले। तपाईंको गोपनीयतालाई सम्मान गर्दै दुई जनाबीच भएका कुरालाई यसले रेकर्ड नराख्ने सिस्टम बनाएको छ।
सगुनको मोवाइल एपमा गरिएको च्याट साथीले पढीसकेपछि आफैं डिलिट हुने भएपछि यसमा नयाँनयाँ प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ। पत्याउनु भएन ? एक पटक एन्डरोइड मोवाइल भएकाहरुले सगुन एप डाउनलोड गर्नुस्। अनिमज्जाले धितफुकाएर आफ्नो गोप्य कुरा च्याटमा भन्नुस्। तपाइले आफै अनुभुति गर्न सक्नुहुनेछ।
अमेरिकी सेयर बजारमा मिनी आइपिओ जारी गरेको आइटी स्टार्टअप कम्पनी सगुनले स्मार्ट फोनका पारखीहरुले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको मोवाइल एप दिल्लीबाट सार्बजनिक गरेको छ। उक्त एप बलिउड अभिनेतृ श्रद्धा कपुरले जनवरी ९ मा सार्बजनिक गरेकी थिइन्।
एप सार्बजनिक गरेपछि श्रद्धाले सगुन एप उत्कृष्ट रहेको आफूले पाएको बताइन्।यसमा टुडेज सेक्रेट नामक छुट्टै एप छ, जसबाट हाम्रो दैनिक गोप्य स्टोरीहरु साथीभाई र परिवारलाई सेयर गर्न सकिन्छ। आफ्ना मेमोरेबल इभेन्टहरुलाई सेयर गर्न कस्टोमाइज्ड अप्सन यसमा छ।
अलइनवन एप जस्तै रहेको यस एप माग्रिटिङ एप, क्यालेन्डर, मुड टक लगायतका फिचर छन्। एक पटक एप डाउनलोड गरेर प्रयोग गरेपछि मात्र यसलाई चलाउनुको मज्जा प्रयोगकर्ताहरुले थाहा पाउने छन्। तपाईं पनि सगुनको एप डाउलोड गरेर यसको अनुभव गर्नेकी ?